1 – အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccaya ) file ( 1 of6) – Dhamma Training Center
1 – အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccaya ) file ( 1 of6)
၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)
ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
၁။ အဓိပတိပစ္စည်းသည် အာရုံအားဖြင့်လွန်ကဲသော အစိုးရခြင်းဟူသော အာရမ္မဏာဓိပတိနှင့်
၂။ အတူတကွ ဖြစ်၍ လွန်ကဲသောအစိုးရခြင်းဟူသော သဟဇာတာဓိပတိဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။
ထိုနှစ်မျိုးတို့တွင် အာရုံအားဖြင့် လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့် အာရမ္မဏာဓိပတိဟူသည် –
ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။
အလှူဒါနပေး၍၊ ငါးပါးသီလဆောက်တည်၍၊ ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလကို ဆောက်တည်၍၊ ထိုထိုပြုပြု သမျှသော ကာမာဝစရကုသိုလ်တို့ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။ ရှေးကပြုလုပ် လေ့ကျင့်ခဲ့သော ကာမာဝစရကုသိုလ်တရားအပေါင်းကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။
ဈာနာ ၀ုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။
ဈာန်ဝင်စားပြီးနောက် ဈာန်မှထမြောက်၍ ၀င်စားပြီးသော ဈာန်ကို ဆင်ခြင်၏။
( က ) Adhipati means predominance. There are two kinds of Adhipati.Arammanadhipati and Sahajatadhipati. Arammana-dhipati is very charming object. This object can charm our mind to it Sahajatadhipati is compared toaunversal king because that king is the king of all the world. He is the one who is predominant in all of the world. As Sahajatadhipati is compared toauniversal king and also we may compare it toapresident in this country. The president has the sole power, so Adhipati is like the president.They are predominant desire, predominant effort, predominant mind and predominant investigation.
အာရမ္မဏာဓိပတိသည် အာရုံအကြီးအမှူးဖြစ်ပြီး သဟဇာတာဓိပတိသည် အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန် နာမ်တရား အကြီးအမှူးဖြစ်သည်။
ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဟူသော အရိယာ သေက္ခာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သောတာပတ္တိမဂ်၏ရှေ့ ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို လွှမ်းမိုးဖျက်စီးတတ်သည့် ဂေါတြဘူကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြ၏။
ဝေါဒါနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။
သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၏ ရှေ့ကိလေသာမှ ဖြူစင်ခြင်း ဝေါဒါန်ကို ဆင်ခြင် သုံးသပ်ကြ၏။
ကျင့်ဆဲဖြစ်သောအရိယာ သေက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိတို့ဆိုင်ရာ သောတာပတ္တိမဂ်၊ သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်မှ ထမြောက်၍၊ မိမိဆိုင်ရာဆိုင်ရာမဂ်ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်ကုန်၏။
အတူတကွဖြစ်၍ လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့် သဟဇာတာဓိပတိဟူသည် –
ကုသလာဓိပတိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။
ကုသိုလ်ဖြစ်သော အဓိပတိက မိမိနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲဖြစ်သော ဝေဒနက္ခန္ဓာ၊ သညက္ခန္ဓာ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ၀ိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့အား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
(ခ-၁) အာရမ္မဏာဓိပတိသည် အာရုံအကြီးအမှူးဖြစ်ပြီး သဟဇာတာဓိပတိသည် အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန် နာမ်တရား အကြီးအမှူးဖြစ်သည်။
(ခ-၂) အဓိပတိမှာ အကြီးအမှူးဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ ဣန္ဒြိယမှာ အစိုးရသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသဖြင့် အနက်ဓိပ္ပါယ် တူသယောင်ယောင် ထင်ရသည်။ ဤနေရာတွင် မတူညီကြောင်းကို ဥပမာဖြင့် ပြဆိုလျှင် ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်မင်းများ၏ အစိုးရခြင်းက ဣန္ဒြိယပစ္စည်း ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အတူမရှိ ပြိုင်ဘက်ကင်းသည့် စကြာမင်းတို့၏အုပ်စိုးမှုကိုမူ အဓိပတိပစ္စည်း ယူသင့်ကြောင်း ဆရာမြတ်တို့က ညွှန်းတော်မူပါသည်။
(ခ-၃) အာရမ္မဏာဓိပတိဟူသည် အာရုံခြောက်ပါးကို အာရုံပြုရာတွင် သာမညအာရုံပြုခြင်းနှင့် ဂရုံကတွာ အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက်အာရုံပြုခြင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။
(ခ-၄) ပမာအားဖြင့် မြင်လိုက်မိသည့် အာရုံတစ်ခုခု၊ ကြားလိုက်မိသော အာရုံတစ်ခုခုက ‘မျက်စိထဲက မထွက် တော့ဘူး’ ‘နားထဲကမထွက်တော့ဘူး’ဟူရာ၌ အာရမ္မဏာဓိပတိထိုက်သည်။ ဣဋ္ဌာရုံ၌လည်းတူတူ၊ အနိဋ္ဌာရုံ ၌လည်း တူတူပင်ဖြစ်၏။
(ခ-၅) နိဗ္ဗာန်သည် သာမညအာရုံမဟုတ်သဖြင့် အာရမ္မဏာဓိပတိထိုက်၏။ အကြောင်းမှာ နိဗ္ဗာန်ကို တစ်ကြိမ် အာရုံပြုဖူးသူအဖို့ စိတ်ထဲစွဲမြဲသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၄၁၄။ ကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ အကု-၂)
ကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
အာရုံအားဖြင့် လွန်ကဲစွာဖြစ်၍ အစိုးရသည့် အာရမ္မဏာအဓိပတိဟူသည် –
ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊
အလှူဒါနပေး၍ ငါးပါးသီလနှင့် ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလတို့ပါဝင်သော ကာမာဝစရကုသိုလ် တရားတို့ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ထိုထိုပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်ကို အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက် ကြည်နူး၏၊ ထို သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက် ကြည်နူးမှုကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။
ရှေး၌ ကောင်းစွာ လေ့ကျက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကုန်သော ထိုထိုဒါန၊ သီလနှင့် ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလ ဟူသော ကာမာဝစရ ကုသိုလ်တို့ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ အဿာဒေတိ သာယာ မြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက် ကြည်နူး၏၊ ထိုသာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက် ကြည်နူးမှုကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
လောကီ ကုသိုလ်ဈာန်ဝင်စားခြင်းမှထ၍ ယင်းဈာန်ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက်၏၊ ထို နှစ်သက် သာယာ မြတ်နိုးသော စိတ်ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊
၃-အဓိပတိပစ်စယော ( Pyidaungsu – Unicode)
၄၁၃။ ကုသလော ဓမ်မော ကုသလဿ ဓမ်မဿ အဓိပတိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (ကု၊ ကု-၁)
ကုသိုလျတရားသညျ ကုသိုလျတရားအား အဓိပတိပစ်စယသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏။
၁။ အဓိပတိပစ်စညျးသညျ အာရုံအားဖွငျ့လှနျကဲသော အစိုးရခွငျးဟူသော အာရမ်မဏာဓိပတိနှငျ့
၂။ အတူတကှ ဖွဈ၍ လှနျကဲသောအစိုးရခွငျးဟူသော သဟဇာတာဓိပတိဟူ၍ နှဈမြိုးရှိ၏။
ထိုနှဈမြိုးတို့တှငျ အာရုံအားဖွငျ့ လှနျကဲစှာ အစိုးရသညျ့ အာရမ်မဏာဓိပတိဟူသညျ –
ဒါနံ ဒတှာ သီလံ သမာဒိယိတှာ ဥပေါသထကမ်မံ ကတှာ၊ တံ ဂရုံ ကတှာ ပစ်စဝက်ေခတိ၊ ပုဗ်ဗေ သုစိဏ်ဏာနိ ဂရုံ ကတှာ ပစ်စဝက်ေခတိ။
အလှူဒါနပေး၍၊ ငါးပါးသီလဆောကျတညျ၍၊ ရှဈပါးသောဥပုသျသီလကို ဆောကျတညျ၍၊ ထိုထိုပွုပွု သမြှသော ကာမာဝစရကုသိုလျတို့ကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျအာရုံပွု၍ ဆငျခွငျ၏။ ရှေးကပွုလုပျ လကေ့ငျြ့ခဲ့သော ကာမာဝစရကုသိုလျတရားအပေါငျးကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ ဆငျခွငျ၏။
ဈာနာ ဝုဋ်ဌဟိတှာ ဈာနံ ဂရုံ ကတှာ ပစ်စဝက်ေခတိ။
ဈာနျဝငျစားပွီးနောကျ ဈာနျမှထမွောကျ၍ ဝငျစားပွီးသော ဈာနျကို ဆငျခွငျ၏။
အာရမ်မဏာဓိပတိသညျ အာရုံအကွီးအမှူးဖွဈပွီး သဟဇာတာဓိပတိသညျ အတှငျးအဇ်ဈတ်တသန်တာနျ နာမျတရား အကွီးအမှူးဖွဈသညျ။
ကငျြ့ဆဲဖွဈသော သောတာပနျ၊ သကဒါဂါမျ၊ အနာဂါမျဟူသော အရိယာ သက်ေခာ ပုဂ်ဂိုလျတို့သညျ သောတာပတ်တိမဂျ၏ရှေ့ ပုထုဇဉျအနှယျကို လှမျးမိုးဖကျြစီးတတျသညျ့ ဂေါတွဘူကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ ဆငျခွငျသုံးသပျကွ၏။
ဝေါဒါနံ ဂရုံ ကတှာ ပစ်စဝက်ေခန်တိ။
သကဒါဂါမိမဂျ၊ အနာဂါမိမဂျ၏ ရှကေိ့လသောမှ ဖွူစငျခွငျး ဝေါဒါနျကို ဆငျခွငျ သုံးသပျကွ၏။
ကငျြ့ဆဲဖွဈသောအရိယာ သက်ေခာပုဂ်ဂိုလျတို့သညျ မိမိတို့ဆိုငျရာ သောတာပတ်တိမဂျ၊ သကဒါဂါမိမဂျ၊ အနာဂါမိမဂျမှ ထမွောကျ၍၊ မိမိဆိုငျရာဆိုငျရာမဂျကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ ဆငျခွငျကုနျ၏။
အတူတကှဖွဈ၍ လှနျကဲစှာ အစိုးရသညျ့ သဟဇာတာဓိပတိဟူသညျ –
ကုသလာဓိပတိ သမ်ပယုတ်တကာနံ ခန်ဓာနံ အဓိပတိပစ်စယနေ ပစ်စယော။
ကုသိုလျဖွဈသော အဓိပတိက မိမိနှငျ့အတူ ယှဉျတှဲဖွဈသော ဝဒေနက်ခန်ဓာ၊ သညက်ခန်ဓာ သင်ျခါရက်ခန်ဓာနှငျ့ ဝိညာဏက်ခန်ဓာ ဟူသော နာမျခန်ဓာလေးပါးတို့အား အဓိပတိပစ်စယသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏။
(ခ-၁) အာရမ်မဏာဓိပတိသညျ အာရုံအကွီးအမှူးဖွဈပွီး သဟဇာတာဓိပတိသညျ အတှငျးအဇ်ဈတ်တသန်တာနျ နာမျတရား အကွီးအမှူးဖွဈသညျ။
(ခ-၂) အဓိပတိမှာ အကွီးအမှူးဟု အဓိပ်ပါယျရပွီး၊ ဣန်ဒွိယမှာ အစိုးရသညျဟု အဓိပ်ပါယျရသဖွငျ့ အနကျဓိပ်ပါယျ တူသယောငျယောငျ ထငျရသညျ။ ဤနရောတှငျ မတူညီကွောငျးကို ဥပမာဖွငျ့ ပွဆိုလြှငျ ထီးပွိုငျနနျးပွိုငျမငျးမြား၏ အစိုးရခွငျးက ဣန်ဒွိယပစ်စညျး ယူရမညျဖွဈပွီး၊ အတူမရှိ ပွိုငျဘကျကငျးသညျ့ စကွာမငျးတို့၏အုပျစိုးမှုကိုမူ အဓိပတိပစ်စညျး ယူသငျ့ကွောငျး ဆရာမွတျတို့က ညှနျးတျောမူပါသညျ။
(ခ-၃) အာရမ်မဏာဓိပတိဟူသညျ အာရုံခွောကျပါးကို အာရုံပွုရာတှငျ သာမညအာရုံပွုခွငျးနှငျ့ ဂရုံကတှာ အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျအာရုံပွုခွငျးဟူ၍ နှဈမြိုးရှိ၏။
(ခ-၄) ပမာအားဖွငျ့ မွငျလိုကျမိသညျ့ အာရုံတဈခုခု၊ ကွားလိုကျမိသော အာရုံတဈခုခုက ‘မကျြစိထဲက မထှကျ တော့ဘူး’ ‘နားထဲကမထှကျတော့ဘူး’ဟူရာ၌ အာရမ်မဏာဓိပတိထိုကျသညျ။ ဣဋ်ဌာရုံ၌လညျးတူတူ၊ အနိဋ်ဌာရုံ ၌လညျး တူတူပငျဖွဈ၏။
(ခ-၅) နိဗ်ဗာနျသညျ သာမညအာရုံမဟုတျသဖွငျ့ အာရမ်မဏာဓိပတိထိုကျ၏။ အကွောငျးမှာ နိဗ်ဗာနျကို တဈကွိမျ အာရုံပွုဖူးသူအဖို့ စိတျထဲစှဲမွဲသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၄၁၄။ ကုသလော ဓမ်မော အကုသလဿ ဓမ်မဿ အဓိပတိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (ကု၊ အကု-၂)
ကုသိုလျတရားသညျ အကုသိုလျတရားအား အဓိပတိပစ်စယသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွု၏။
အာရုံအားဖွငျ့ လှနျကဲစှာဖွဈ၍ အစိုးရသညျ့ အာရမ်မဏာအဓိပတိဟူသညျ –
ဒါနံ ဒတှာ သီလံ သမာဒိယိတှာ ဥပေါသထကမ်မံ ကတှာ၊ တံ ဂရုံ ကတှာ အဿာဒတေိ အဘိနန်ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတှာ ရာဂေါ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဒိဋ်ဌိ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊
အလှူဒါနပေး၍ ငါးပါးသီလနှငျ့ ရှဈပါးသောဥပုသျသီလတို့ပါဝငျသော ကာမာဝစရကုသိုလျ တရားတို့ကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ ထိုထိုပွုပွုသမြှ ကုသိုလျကို အဿာဒတေိ သာယာမွတျနိုး၏၊ အဘိနန်ဒတိ အလှနျ နှဈသကျ ကွညျနူး၏၊ ထို သာယာ မွတျနိုး နှဈသကျ ကွညျနူးမှုကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ စှဲလမျးကပျငွိမှုရာဂ ဖွဈပျေါလာ၏၊ အယူလှဲမှားမှုဒိဋ်ဌိ ဖွဈပျေါလာ၏။
ပုဗ်ဗေ သုစိဏ်ဏာနိ ဂရုံ ကတှာ အဿာဒတေိ အဘိနန်ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတှာ ရာဂေါ ဥပ်ပဇ်ဇတိ၊ ဒိဋ်ဌိ ဥပ်ပဇ်ဇတိ။
ရှေး၌ ကောငျးစှာ လကေ့ကျြပွုလုပျခဲ့ပွီးကုနျသော ထိုထိုဒါန၊ သီလနှငျ့ ရှဈပါးသောဥပုသျသီလ ဟူသော ကာမာဝစရ ကုသိုလျတို့ကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ အဿာဒတေိ သာယာ မွတျနိုး၏၊ အဘိနန်ဒတိ အလှနျ နှဈသကျ ကွညျနူး၏၊ ထိုသာယာ မွတျနိုး နှဈသကျ ကွညျနူးမှုကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ စှဲလမျးကပျငွိမှုရာဂ ဖွဈပျေါလာ၏၊ အယူလှဲမှားမှုဒိဋ်ဌိ ဖွဈပျေါလာ၏။
လောကီ ကုသိုလျဈာနျဝငျစားခွငျးမှထ၍ ယငျးဈာနျကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ အဿာဒတေိ သာယာမွတျနိုး၏၊ အဘိနန်ဒတိ အလှနျ နှဈသကျ၏၊ ထို နှဈသကျ သာယာ မွတျနိုးသော စိတျကို အလေးအမွတျ ဂရုတစိုကျ အာရုံပွု၍ စှဲလမျးကပျငွိမှုရာဂ ဖွဈပျေါလာ၏။ အယူလှဲမှားမှုဒိဋ်ဌိ ဖွဈပျေါလာ၏၊